Ihe Heidi Melin dere na Martech Zone |
Edemede site na Heidi Melin
Ndị na-ere ahịa na ndị okike nwere ike ịnweta ntakịrị nkwekọ mgbe okwu gbasara usoro abịa. Nke a ekwesịghị iju anyị anya. A sị ka e kwuwe, anyị na-akwụ ha ụgwọ maka ikike ha nwere na mbụ, na-echetụ n'echiche, ọbụnakwa na-adịghị iche. Anyị chọrọ ka ha na-eche echiche kpamkpam, mee ka anyị pụọ n'okporo ụzọ a kụrụ akụ, ma wuo ụdị ọhụụ nke pụtara n'ọma ahịa jupụtara. Anyị enweghị ike ịtụgharị wee tụọ anya na ndị okike anyị ga-ahazi nke ọma, ndị na-eso ụzọ na-achịkwa usoro